Barcelona oo u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta xiddig ka tirsan AC Milan oo ay ku dhow-dahay kooxda Arsenal – Gool FM
Barcelona oo u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta xiddig ka tirsan AC Milan oo ay ku dhow-dahay kooxda Arsenal
(Barcelona) 30 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso xagaagan inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta difaaca naadiga AC Milan ee Ricardo Rodriguez.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Spain ayaa sheegtay inay suuqa kala iibsiga ka doonayso difaac cusub oo garabka bidix ah, kaasoo ay rabto inuu garoonka Camp Nou tartan kula galo Jordi Alba.
Sida ay warinayso Jariiradda Diario Sport, Rodriguez ayaa noqday ciyaaryahanka ay Barca suuqa ka doonayso iyadoo macallinka kooxdaas ee Ernesto Valverde uu ka dhigtay bartilmaameed toos ah, AC Milan ayaana isku diyaarinaysa inay iska iibiso 27-sano jirkaan inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Rodriguez, kaasoo garoonka San Siro kaga soo dhaqaaqay naadiga Wolfsburg sanadkii 2017-kii ayaa gacan ka geystay afar caawin 41 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan kooxda AC Milan intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2018-19.
Difaacan ayaa kaliya seegay saddex kulan oo ay kooxdiisu ciyaartay horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, dhanka kalena waxa uu ahaa ciyaaryahan muhiim ah oo ka tirsan kooxda Talyaaniga labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
Kooxda Ingiriiska ka dhisan ee Arsenal ayaa sidoo kale la warinayaa inay fursad u haysato inay la soo saxiixato Rodriguez xagaagan oo ay ku dhow-dahay, iyadoo AC Milan ay difaacan qeyb uga dhigayso dalabka ay kaga doonayso Gunners laacibka khadka dhexe ee xulka qaranka Uruguay ee Lucas Torreira.
Xilliga uu imaanyo Turin, goorta uu tijaabada caafimaad mari doono iyo wax waliba oo ku saabsan heshiiska uu Adrien Rabiot ugu biirayo Juventus